Crime – Categories – MMANIME
Happy Sugar Life ဇာတ္ကားရဲ႕နာမည္က ခ်စ္စရာေကာင္းသလို ျမွဳပ္ကြက္ေတြမ်ားတဲ့ဇာတ္ကားျဖစ္ပါတယ္ 12 episode ပါ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း.... အထက္တန္းေက်ာင္းသူေလး Satou Matsuzaka ဟာ shio လို႔ေခၚတဲ့ ထူးဆန္းတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး ခ်စ္မိသြားခဲ့ပါတယ္ . . . . Shio နဲ႔ ေတြ႕ဆံုျပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ Matsuzaka တစ္ေယာက္ဟာ သူ႕ကိုလာပိုးပန္းတဲ့ ေကာင္ေလးေတြကိုေတာင္ျငင္းျပီး ခံစားခ်က္ေတြကို Shio အေပၚမွာသားထားရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ Shio နဲ႔အတူရွိေနတဲ့အခ်ိန္ အတူအိပ္တဲ့အခ်ိန္ေတြ မွာ Matsuzaka အတြက္ ခ်ိဳျမိန္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြခံစားရျပီး သူမကအဲ့တာကို အခ်စ္လို႔သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ . . . . Matsuzaka တစ္ေယာက္ အဲ့ဒီခ်ိဳျမိန္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ရာဇဝတ္မွဳေတြနဲ႔ လူသတ္တာေတြကိုပါက်ဴးလြန္တဲ့အထိျဖစ္လာပါေတာ့တယ္ Shio ဆိုတဲ့ေကာင္မေလးက ဘယ္ကလာတာလဲ ဘယ္သူလဲဆိုေတာ့ ျမွဳပ္ကြက္ေတြနဲ႔ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ Serie တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ Generes : Drama , horror , shounen. Translated and encoded by phyowaithan Download Links . . . . Ending song : here Episode ...
Tokyo Ghoul S1 Review - (black bull ) ကြိုပီးတော့ပြောထားတာပါ review ရှည်သွားရင် sorry ပါဗျ -ဇာတ်လမ်းကိုတော့ Tokyo မြို့မှာ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ စိတ်ကူးရင်ဆန်ဆန် ဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။ “Ghouls” တွေလို့ အမည်ရတဲ့ ထူးဆန်းသက်ရှိတွေက လူသားတွေကို အမဲလိုက်စားသောက်ခံနေရသလို (လူသားစားတာပေါ့) သူတို့တွေက မျက်နှာဖုံးတွေ ဝတ်ဆင်ထားလေ့ရှိကြသဖြင့် ဘယ်သူကဖြင့် ghoul ဆိုတာမပြောနိုင်တဲ့အတွက် လူသားတွေအနေနဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကြားမှာ လှုပ်ရှားသွားလာနေကြရပါတယ်။ Kaneki Ken ဆိုတဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ဟာ Kamishiro Rize ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေး တစ်ဆိုင်မှာ ဆုံတွေမိခဲ့ကြတယ်။ ဆိုင်လေးနာမည်က Anteiku။ စာပေဗဟုသုတ ဝါသနာပါတဲ့သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် ဖလှယ်ကြရင်းနဲ့ date ဖြစ်သွားကြတယ်။ အဲ့ဒီည Kaneki တစ်ယောက် Rize ကို အိမ်ပြန်လိုက်ပို့ရင်းနဲ့ လူပြတ်တဲ့နေရာ ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Rize ရဲ့ တိုက်ခိုက်တာကို ...
Tokyo Ghoul :Re “S2” Tokyo ghoul:re 2nd season (720P) Review Tokyo ghoul:re 1st season မှာတော့ Kanekiဟာအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုမေ့ပျောက်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့သူဟာ Kaneki ဆိုတဲ့လူရဲ့ဘဝအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲ Sasaki Haise ဆိုတဲ့ဘဝအနေနဲ့ပေါ့။သူအဲ့ဒီဘဝမှာပျော်ခဲ့တယ်။Quinxဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးလည်းတည်ထောင်ခဲ့တယ်။မိသားစုလိုခင်ရတဲ့သူတွေလည်းရခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့်Arima Kishou ပေါ့။ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာHaiseရဲ့ခေါင်းထဲမှာတစ်ယောက်ယောက်ကအမြဲနှောင့်ယှက်နေခဲ့တယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီလူဟာဘယ်သူလဲဆိုတာသူသိချင်လာတယ်။နောက်တော့သူသိလိုက်ရတာကသူ့ခေါင်းထဲမှာနှောင့်ယှက်နေတာကသူ့ရဲ့အရင်ဘဝဖြစ်တဲ့Kaneki Kenပါပဲ။ဒါကိုသူလက်မခံနိုင်သေးပါဘူး အများကြီးစုံစမ်းပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာHaiseဆိုတဲ့ခဏတာအိပ်မက်ကလေးကနိုးထလာပြီးKaneki Kenဆိုတဲ့ဘဝကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးမှတ်မိလာပါတယ်။အခုTokyo ghoul:re 2nd season မှာတော့သူ့ကိုKaneki Kenအဖြစ်နဲ့ပြန်လည်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အခါကျသူဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားမလဲ။Arimaနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကတော့...ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါနော်။ 720p Ep-1 Ep-2 Ep-3 Ep-4 Ep-5 Ep-6 Ep-7 Ep-8 Ep-9 Ep-10 Ep-11 Ep-12 480p Ep-1 Ep-2 Ep-3 Ep-4 Ep-5 Ep-6 Ep-7 Ep-8 Ep-9 Ep-10 Ep-11 Ep-12 Translator:Kan San Encoder:Izu,Peter
TMDb: 7.6/10 262 votes
Bungo Stray Dogs နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Anime လေးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့" Bungo Stray Dogs" နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ... မူလဘာသာပြန်သူကတော့ လေလွင့်ပညာရှင်များလို့ ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ .. Rating 7.8/10 ရှိထားလို့ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ Anime ကောင်းလေးပါ ... ဇာတ်လမ်းကတော့ စွမ်းအင်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စုံထောက်အေဂျင်စီတစ်ခုက စုံထောက်တွေရဲ့ အမှုဖြေရှင်းတာတွေ အခက်အခဲတွေကို တွေ့ရမှာပါ ။ အဓိက ဇာတ်ဆောင်ကတော့ နာကဂျီမာ အဆုရှီလို့ အမည်ရပြီး မိဘမဲ့ဂေဟာကနေအကြောင်းတစ်ခုကြောင့် နှင် ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။... ဒီလိုနဲ့မှီခိုစရာမရှိတာကြောင့်ခြေဦးတည့်ရာလျှောက်သွားရင်းအမြဲကိုယ့်ကိုကိုယ်သေဖို့နည်းလမ်းရှာနေတဲ့သူဒဇိုင်းဆိုတဲ့စုံထောက်အေဂျင်စီက အေးဂျင့်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေဒဇိုင်းနဲ့သူ့ပါတနာတို့ဟာခုတလောလူနေထိုင်ရာအိမ်ခြေနေရာတွေမှာတွေ့နေရတဲ့သမန်းကျားတစ်ကောင်အကြောင်းကိုလိုက်လံစုံစမ်းနေတာဖြစ်ကြောင်းစကားစပ်မိသွားတဲ့အခါအဆုရှီဟာသူ့နောက်ကိုသမန်းကျားလိုက်ခံနေရတာကြာပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒဇိုင်းတို့အဖွဲ့ဟာ အဆုရှီကို အသုံးချ ပြီး ကျားဖမ်းဖို့ ပြင်ပါတော့တယ် ... ဒါပေမယ့် ... မထင်မှတ်ထားတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့....... ဒီAnime ရဲ့ seasonတိုင်းမှာDazaiရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကနဲအကျဉ်းဆီပါဝင်နေပါတယ်။ ယခုSeason-3မှာပါဝင်တဲ့Dazaiရဲ့နောက်ကြောင်းအနဲငယ်ကိုလဲReviewရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ သုံးပွင့်ဆိုင်စည်းရုံးရေးစစ်ပွဲအဆုံးသတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ,အစိုးရဗျူရိုကရေစီအရာရှိ Ango Sakaguchiဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကယခင်Port Merfiaခေါင်းဆောင်သေဆူံးမှုအပြီးမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ အဲ့ဒိအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းCharacterနဲ့လူကြိုက်များတဲ့Osamu Dazaiဟာမြို့ရဲ့နေရာအတော်များများကိုပျက်စီးစေခဲ့တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပက်သက်တဲ့ကောလဟာလတွေနဲ့ယခင်Mafiaခေါင်းဆောင်ပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲမှုတွေ ကိုစုံစမ်းဖို့တာဝန်ပေးခြင်းခံထားရတဲ့လူသစ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနုသေးတာကြောင့်ပြိုင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Sheepလို့အမည်ရတဲ့ ပင်ကိုစိတ်ကြမ်းလူကြမ်းChuuya Nakaharaနဲ့တွဲပြီးအဲ့ဒိအဖြစ်အပျက်ရဲ့နောက်ကွယ်ကအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့Arahabakiဆိုတဲ့ဒဏ္႑ာရီယုံတမ်းစကားအပေါ်မှာအဖြေရှာကြပါတော့တယ်။ လက်ရှိနေ့ရက်တွေမှာတော့Armed Detective Agencyဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးဟာနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့လည်ပတ်လို့နေပါတယ်။ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အေးချမ်းတဲ့အချိန်လေးဟာဘယ်လောက်မှကြာကြာမခံလိုက်ပါဘူး၊ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါ။ Bungo Stray Dogs S03 Episode 1